Hetra ACD tsy mitombina : rehefa lalàna dia lalàna! | NewsMada
Hetra ACD tsy mitombina : rehefa lalàna dia lalàna!
Nanaitra! Hatraiza ny toky omena sy torina etsy sy eroa fa tena hampiharina ny fanjakana tan-dalàna, anisan’ny fepetra takin’ny mpamatsy vola sy ny vondrona iraisam-pirenena? Hanamarinana izany, tsy ampiharina ara-bakiteny ny lalàna manan-kery, toy ny Lalàna mifehy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany vaventy (LGIM), ohatra, mamaritra mazava ny Tetikasa Ambatovy. Raha ny vaovao farany, nihaona tamin’ny 22 febroary teo ny tompon’andraikitry ny tetikasa Ambatovy sy ny filohan’ny vaomiera misahana ny famatsiam-bola amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany vaventy (CGIM) ao amin’ny holafitry ny filoha, Rtoa Ranoroharisoa Tsilavina Omega.
Mazava ary tsy nisy nanohitra ny mpivory roa tonta fa lalàna tsy azo ihodivirana sy tsy azo toherina ny LGIM. Arofanina mamaritra fa tsy voafehin’ny karazana lalàna na didy samihafa mikasika ny fanovana ny hetra io lalàna io, araka ny voalazan’ny andininy faha-27 sy ny faha-29, milaza fa tsy voakasik’izany ny Tetikasa Ambatovy.
Tsy hanana antoka ny fampiasam-bola vahiny
Nandritra io fihaonana io, voafaritra mazava fa hanana fiantraikany ratsy ho an’ny governemanta malagasy ny tsy fisian’ny antoka ho an’ny mpampiasa vola vahiny fehezin’ny LGIM. Ao anatin’izany ny tsy fampiharana fa tsy mandoa hetra sy tamberim-bidy ny Tetikasa Ambatovy, toy ny natao hatramin’ny nisiany eto Madagasikara. Na izany aza, nisy taona maro tsy nampandoavana tamberim-bidy azy ireo, fa naloa taty aoriana, toy ny hetra ho an’ny karaman’ny mpiasa (taxe professionnelle), ny TFT, ny TAFPB, ny IRCM, ny IBS, ny AMSA (natao 25% raha tokony ho 20%). Izany hoe , raha fintinina, nanara-dalàna hatrany ny Tetikasa Ambatovy.
Raha ny voasoritra ao anatin’ny andininy faha-27 fehezin’ny LGIM, tsy tokony ho fehezin’ny ACD mihitsy ny tetikasa Ambatovy, fa raha tsy izany, tsy manaja ny toky nomeny sy ny andraikitra tandrify azy ary ny antoka nomeny ny governemanta malagasy, izay inoana fa tsy holaviny ny fampiharana azy.
Tsy mahakasika an’Ambatovy ny ACD
Raha ny antony nanaovana ny ACD, lazaina fa hiantohana ny lafiny fitaterana an-dranomasina eny amin’ny seranan-tsambo (sureté) ny antony ampiharana azy. Vonona ny hanatanterahana izany ny Tetikasa Ambatovy, araka io fihaonana tamin’ny CGIM ny 22 febroary io. Soso-kevitra naroson’ity orinasa ity ny hananganana vaomiera iombonana iarahana amin’ny governemanta, handinika akaiky io lafiny antoka amin’ny seranan-tsambo io. Hamafisin’izy ireo koa fa tsy mahakasika azy ireo velively ny ACD, satria tanjona ny hisian’ny fahamarinan-toerana amin’ny lafiny hetra, araka ny faritan’ny LGIM. Nanome toky ity orinasa ity fa vonona hatrany handoa ny hetra tandrify azy, araka ny voalaza etsy ambony.
Mitady irika inona ny minisitera samihafa?
Talohan’ity fihaonana tamin’ny CGIM ny 22 febroary ity, nandefa taratasy any amin’ny Tetikasa Ambatovy ny minisitry ny Fitaterana an-tanety, an-dranomasina, an’habakabaka, ny 18 febroary. Voalaza ao fa tsy mandoa ACD ny fanondranana entana any ivelany Ambatovy, mandra-pahatonga ny fepetra manaraka. Mikasika ny fanafarany akora avy any ivelany indray, misy ny fivorian’ny minisitera voakasika isan-tsokajiny (ny Harena an-kibon’ny tany, ny Fizahantany, ny Fitaterana), ka andrasana ny fehinkevitra havoakany.
Araka ny voalaza ery ambony, rehefa lalàna dia lalàna. Koa, irika inona indray no tadiavin’ireo minisitera mikaondoha ireo, ary efa io taterina io ny fihaonan’ny Tetikasa Ambatovy sy ny vaomiera ao amin’ny holafitry ny filoha CGIM, ny 22 febroary?